Muuri News Network » Daawo Sawirro: Koobka kubada cagta UEFA Champions League oo caawa lagu guuleystay
Daawo Sawirro: Koobka kubada cagta UEFA Champions League oo caawa lagu guuleystay
Jun 4, 2017 - Comments off
ooxda Real Madrid ayaa taariikh cusub u dhigtay kooxaha Yurub kadib markii ay 4:1 ku xasuuqday kooxda Juventus waxaana Real Madrid noqotay kooxdii ugu horaysay ee koobka UEFA Champions League-ga difaacatay iyadoo kulankan uu laba gool ka dhaliyay Cristiano Ronaldo oo isna dhiniciisa taariikh cusub dhigay.
Bilawgii ciyaarta Juventus ayaa dardar fiican ku bilaabtay waxayna walal ku abuurtay Real Madrid oo aan markiiba si fiican iskugu dhex helin garoonka, iyagoo khasaariyey fursado ay goolal ku dhalin kareen.
Base Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii 20aad ayaa kooxdiisa Real Madrid kaga farxiyay goolka furitaanka isaga oo waliba goolkan ka dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa Juventus waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay hogaanka Madrid ku qabtay.
Daqiiqadii 27aad Mario Mandžukić ayaa u jawaabay Cristiano Ronaldo kadib markii uu dhaliyay gool la yaableh oo uu ku dhaliyay qaab laba lugoodley ah waxaynu ciyaarta noqotay barbaro 1-1 ahm qeybtii hore ee ciyaartana sidaas ayaa lagu kala nastay.
Daqiiqadii 61aad Real Madrid ayaa heshay goolkeeda labaad ee murugada badan ku abuuray Juventus waxaana goolkan dhaliyay Carlos Casemiro waxayna ciyaartu noqotay 2:1 ay Madrid hogaanka ciyaarta dib ugu soo ceshatay.
Cristiano Ronaldo ayaa goolka saddexaad indhaha ku xaday kadib markii uu isaga oo duulaya kubbad ka dhex ka dhex qaatay difaaca Juventus wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolkiisa labaad si uu ciyaarta uga dhigo 3:1 ay Madrid si deg deg ah hogaanka ciyaarta ugu sii dheeraysatay.
Daqiiqadii 84aad Xaalada Juventus ayaa noqotay mid dhimaso ah kadib markii kaarka cas loo taagay Juan Cuadrado oo ciyaarta badal ku soo galay kadib markii uu ka jawaabay in Ramos uu si xoogan iskugu soo tuuray, kabtanka Los Blancos ayaa si sahlan dhulka iskugu tuuray markii uu Cuadrado taabashada ugu yar uu gacantiisa ku riixay wuxuuna si cad Ramos u qalqaaliyay karaka cas taas oo keentay in xidiga reer Colombia ciyaarta dibada looga saaro.
Marco Asensio oo ciyaarta badal ku soo galay ayaa taariikh isaga u gooni ah sameeyay kadib markii uu kooxdiisa Real Madrid u dhaliyay goolka afraad ee ay Juventus ku ceebeeyeen wuxuuna Marco Asensio sidii caadada u ahayd wuxuuna ciyaarta ka dhigay 4:1 ay Madrid ku xasuuqayso Juventus sidaas ayey ku soo dhamaatay ciyaarta waxaana koobka UEFA Champions Leaque ku guuleysatay kooxda Real Madrid, iyadoo la isweydiinayey halka u ka baxay difaaci adkaa ee looga bartay Juventus.